ဆေးစွမ်းနဲ့နွားသိုးကြိုးပြတ် – Grab Love Story
နာမည်က နှင်းဝေ… ဒီဇင်ဘာလ နှင်းတွေကျတဲ့အချိန်ကြီးမွေးလို့ အလွယ်တကူနဲ့လှလှလေးပေးထားကြတာ။ ဆွေမျိုးထဲမှာ သမီးမိန်းကလေးဆိုလို့ နှင်းဝေတစ်ယောက်ထဲ။ ၀မ်းကွဲဆိုလို့ မောင်တွေ အကိုတွေချည်း ဒါ့ထက်ဆိုးတာ နှင်းဝေ ဦးလေးက ရပ်ကွက် လူမိုက်။ ဓါးထိုးမှုနဲ့ ထောင်ထဲကထွက်တဲ့အချိန် တူမလေးမွေးမှ မိုက်တာရပ်တော့တာ။ နှင်းဝေ မွေးကတည်းက တဆွေတမျိုးလုံးစီးပွားတက်တော့ အကုန်လုံးက၀ိုင်းချစ်ကြတာပေါ့။ဦလေးကလည်း လူမိုက် အကိုတွေမောင်တွေလည်း များတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရည်းစားကမရ။ ညားမယ့်ညားတော့လည်း အညာသား နဲ့မှညားတော့တာ။ အပျိုကြီးပေါက်စဖြစ်နေတဲ့အချိန် အသက်သုံးဆယ့်ငါး ရန်ကုန်လာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ မလည်မ၀ယ် အညာသားနဲ့ ညားပါလေရော။ မောင်အညာသားက ရန်ကုန်မှာ အဲကွန်းတွေပြင်တယ်။ အဲ့တုန်းက နှင်းဝေ အဆောင်နေတုန်း အဲကွန်းလာပြင်တဲ့ မောင်ညာသားနဲ့ငြိပြီး အပိုင်ဝိုက်ပလိုက်တာ။
မ၀ိုက်လို့လဲမရဘူးလေ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေနဲ့ညားဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်။ အညာသားကလည်းအိမ်ကိုလာတောင်းတော့ ဆွေစုံမျိုးစုံပဲ။ တွဲတာ တစ်လလောက်နဲ့ အိမ်ပေါ် ကန်တော့ပွဲကြီးမလာတာ ဒီတော့လည်း မငြင်းသာဘူးပေါ့။ အညာသားမှာလည်း အကိုတွေညီတွေချည်းပဲ လာတင်တောင်းတာတော့ ရွှေငါးကျပ်သားနဲ့ ဗျ။ အရမ်းအများကြီးမဟုတ်ပေမယ့် နည်းတာတော့မဟုတ်။ အညာသားတို့ဆွေမျိုးတွေကလည်း မြို့သူချောချောလေးရတာဆိုတော့ ၀ိုင်းအုံပြီး တင်တောင်းကြတာလေ။ ပြုံးပြုံးကြီးရှိနေတာကတော့ ဘယ်သူရှိမတုန်း။သူ့ဦးလေး လူမိုက်ကြီးပေါ့။ မင်္ဂလာတွေဘာတွေဆောင်ပြီးလို့ ဆွေပြမျိုးပြလေး အညာလည်ကြမယ်ဆိုတော့မှ ခမျာမှာ မပြုံးနိုင်တော့။ အညာမှာ တစ်လလောက်နေဖို့ ခွင့်တွေပါယူပြီး ထွက်လာခဲ့တယ် လမ်းမှာတော့ ဖုန်ကတထောင်းထောင်းနဲ့ ရွာရောက်တော့ မြို့သူလည်း ရွံ့ရုပ်ဖြစ်ကရော ရွာလေးက အတော်ဝေးတယ်။
မြင်းခြံမြို့ကြီးကနေတဆင့် တက္ကစီတွေ လိုင်းကားတွေထပ်ငှားပြီးမှ ရွာဖက်ေ၇ာက်တာ။ ရွာဆိုပေမယ့် မြေနီလမ်းလေးတစ်ခုပဲ ရှိတာ။ အိမ်စေ့လိုလို အင်တာနာတိုင်လေးတွေနဲ့ နေရောင်ခြည်သုံး ဘက်ထရီအိုးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့။ အင်တာနက်လည်းရတယ် မြို့သူပါလာတယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးက ကိုယ့်ခြံထဲကနေကိုယ် ယောင်လည်လည်နဲ့ စပ်စုကြတာပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့မှ အံ့သြရတာ နှင်းဝေရယ်။ အိမ်ကြီးက ရေနံချေးသုတ် နှစ်ထပ်အိမ်ကြီး။ ကျယ်လည်အတော်ကျယ်တယ်။ ခြံဝန်းကလည်း ၈၀ ပတ်လည်ခြံကြီး။ ခြံနောက်ဖက်မှာက ပျိုးပင်တွေရယ် တဲပုတ်လေးရယ်ရှိတယ်။ တစ်အိမ်လုံးမှာ မိန်းမသားဆိုလို့ နှင်းဝေရယ် သူ့ယောက္ခမကြီးရယ်။ ကျန်တာအကုန် ယောကျာ်းတွေချည်း။ လာတင်တောင်းတုန်းက ပါလာတဲ့ အဒေါ်တွေ ညီမတွေဆိုတာက တစ်ခြံထဲဆိုပေမယ့် အိမ်မတူကြဘူး။ အညာသား အဲ အညာသားနာမည်က အေးမောင်တဲ့။
အေးမောင်ကိုကြည့်ထားကြဟေ့ နွားပြာကြီးအောက်သွားမရှိဆိုတာ ဒါမျိုး ဟားဟား…. ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က ထဖောက်သဖြင့် ပွဲကျသွားသည်။ တဆက်တည်း ဆက်ဖောက်သူက တခြားသူမဟုတ် အေးမောင်၏ အကိုအရင်း ထွေးမောင် “မင်းတို့ နွားပြာကြီးကလည်းကွာ အောက်သွားမရှိသလို စောက်ဖြစ်လည်းမရှိပေါင်ကွာ။ဟေဟေ” ထွေးမောင်၏ စကားကြောင့် အေးမောင် မျက်နှာကြီးနီရဲသွားကာ ထန်းရည်အိုးကို ယူပြီး ဂလွတ် ဂလွတ်နှင့်မော့ချနေသည်။ “ဟာ ဘယ်လိုတုန်း ကိုထွေးမောင်ရ။ ဒီလောက်ချောပုံရတာ အေးမောင် လမ်းတောင်လျောက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဟားဟား” “ဘယ်ကလာ ငနီရာ။ မင်းကောင်ကြီးက ခုချိန်ထိ လက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့ရသေးဘူးမောင်။ ဟားဟား” “၀ါး..ဟား ဟား ” အကုန်လုံး ၀ိုင်းရယ်ကြသည့် အချိန် “ဒုန်းခနဲ” ထန်းရည်အိုးကို ချရင်း အေးမောင်တစ်ခွန်းထဲပြောသည် ” ဒီညတော့ ကိုကြီးထွေးမောင် စောင့်ကြည့်ထား။
ဒီညတော့ သေချာဖိုက်ပြီပဲ “မင့်မလည်းဖိုက်လာတာ ရန်ကုန်ထဲက ဟော အညာရောက်တာတောင် ပေါင်တံဖြူလားမည်းလားမသိဘူးမဟုတ်လား။ ဟား ဟား ဟား” အကုန်လုံး၏ နောက်ပြောင် ကျီစယ်မှုကို မသိကျိုးကျွံပြုရင်း ထန်းရည် တမြူပြီးတမြူ တကျိုက်ပြီးတကျိုက် မော့သောက်မိပါတော့သည်။ “ကိုအေးမောင်.. ကိုအေးမာင်..။ အာ. ထန်းရည်တွေသောက်လာတာများ နံဟောင်နေတာပဲ။ သွားသွားရေသွားချိုးချေ။” “နှင်း..ဝေ..။ နှင်း ဝေ ဂို ကို သိ ပ် . . . ချစ်..” “တော်တော်.. သွားရေသွားချိုး။ ရေမချိုးရင် အခန်းထဲဝင်မလာနဲ့ဒါပဲ။” ဟု ဆိုကာ တွန်းထုတ်လိုက်သဖြင့် ဖင်ထိုင်လဲကျသွား၏။ ခြံဝမှစောင့်နေသည့် နှင်းဝေ၏ တုံ့ပြန်မှုကြောင့်လည်း ကာလသားတသိုက် ၀ါး ခနဲ ပွဲကျသွားသည်။ ထန်းရည်မူးမူးနှင့် ရေစည်မှ ရေ တစ်မုတ်ပီး တမုတ်လောင်းရင်း စိတ်ထဲမှမခံချင်စိတ်ကော ဒေါသတွေပါ တလှိုက်လှိုက်။ ဆပ်ပြာတိုက်ဖို့ပင်သတိမရတော့။ အိမ်ပေါ်တက်တော့ ညဆယ့်တစ်ပင်ထိုးပီ။
အခန်းထဲရောက်တော့ တစ်ဖက်လှည့်အိပ်နေသော နှင်းဝေ၏ အလှကိုမြင်ကာ တံတွေးဂလုခနဲမျိုချမိသည်။ အ၀တ်အစား မ၀တ်တော့ပဲ ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ခါးကိုကိုင်ရင်း ပွဲကြမ်းမယ်ကြံကာမှ မျက်စိက မှေးမှေးလာကာ အိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်။ မတင်မကျဖြစ်ရသူက နှင်းဝေ။ ခေါ ခလူး နှင့် အိပ်မောကျနေသော လင်တော်မောင်ကိုကြည့်ရင်း ဒေါသကလည်းထွက်သည်။ ငယ်ပါကတော့ ထောင်တာမှမတ်လို့။ အေးမောင်၏ လိင်တံကိုကြည့်ရင်း ရေငတ်သလိုဖြစ်လာကာ။ တက်စောင့်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာသည်။ အို ကိုယ်ကမိန်းကလေးပဲ။ သူက လက်ဖျားနဲ့တောင်မထိတဲ့ကိစ္စ တွေးရင်း ဒေါသထွက်လာကာ တွန်းထုတ်ရင်း အိမ်သာဖက်သို့ထလာခဲ့သည်။ စောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့ ထွက်လာခါကစ တော့ ဒေါသထွက်နေလို့ ပြသနာမရှိ။ အိမ်ပြင်ထွက်တော့မှ ပုဇဉ်းရင်ကွဲသံတွေကြားပြီးကျောချမ်းမိ၊ ဒီမှောင်မိုက်နေတဲ့ လမ်းကြီးကို သူမဖြတ်ရဲ အိမ်သာက ခြံနောက်စွန်းမှာလေ။
ဒီတော့မှ သေးက ပိုထွက်ချင်လာသည် အရင်ညတွေကဆို အေးမောင်ကိုနှိုးပြီး လိုက်ပို့ခိုင်းရသည်။ ခုတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်း။ ဖတ်ခနဲ ပုခုံးလာပုတ်သော လက်အေးအေးကြီးကြောင့် အမလေး ဆိုပြီးလန့်အော်မိသည်။ “ဟဲ့ ဟဲ့ ဘာဖြစ်တာတုန်းဟ” “အော်..ဘယ်သူများလဲလို့လန့်လိုက်တာ ကိုကြီးထွေးမောင်ရယ်။” “အေး.. ဘာလုပ်နေတာတုန်း အိမ်နောက်မှာရပ်ပီး” “ညီမ..အပေါ့သွားမလို့ မသွားရဲ့ လို့.. အဲ့တာ.. အေးမောင်ကလဲ အိပ်နေတာ..” “အာ..ဒါများ ငါတို့လာခေါ်ပေါ့ဟ။ ကျန်တဲ့ကောင်တွေရှိနေတာပဲ။ လာလာ” ထန်းရည်အရှိန်လေးနဲ့မို့ လက်က ဖတ်ခနဲ ဆွဲကာ အိမ်သာသို့ ခေါ်ချလာပါတော့သည်။ အိမ်သာထဲရောက်တော့ ရှဲ ခနဲ သေးထွက်သံက လော်စပီကာဖြင့်ဖွင့်သလို ပင် တိတ်ဆိတ်သောညယံမှာ အသံကျယ်ကြီးထွက်လာသည်။ ရှက်လွန်းလို့ နှင်းဝေ မျက်နှာကြီးနီရဲနေပါတော့သည်။ မတတ်နိုင်ပေ။ အိမ်သာအပေါ်မှ လျှပ်စစ်မီးသီးဝါဖန့်ဖန့်အရောင်က ဘေးဖက်ကို ဖြာကျနေသည်။ ရေခွက်ယူကာဆေးမလို့လုပ်ကာမှ အပြင်မှ အေးမောင်၏ ဗြဲခနဲ သေး ကာ့ပန်းနေသံကြောင့် တွန့်သွား၏။
တဗြဲဗြဲ သေးပန်းနေသော အသံနှင့်အတူ မျက်စိထဲသို ခုနက အေမာင်၏ လီးကြီးက ပေါ်လာသည်။ အတင်းခေါင်းခါကာ ရေခွက်လေးခပ်ရင်း တဖတ်ဖတ်နှင့်ရေဆေးမိကာမှ စိတ်က ထလာ၏။ အိမ်သာဘေးဖက်တွင်လည်း ထရံက အပေါက် ရှိသည်လေ။ အပေါက်က သေးသေးမဟုတ် လက်သုံးလုံးစာလောက်ရှိသည်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ခေါင်းလေးစောင်းကာအပေါက်လေးမှချောင်းကြည့်တော့ မပီဝိုးတ၀ါးနှင့် အေးမောင်၏ ပစ္စည်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရသည်။ ညီအကိုတွေဆိုတော့ ဆိုဒ်ကသိပ်မကွာ။ ဒါပေမယ့် ထွေးမောင်က ပိုကြီးပြီး ပိုတုတ်သည်။ သေးပေါက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ပိုတောင်တာလည်းပါသည်။ ထရံပေါက်လေးက ချောင်းကြည့်ရင်း လက်ကလည်း အဖုတ်လေးကို အလိုလို ကလိနေမိသည်။ လူနပ်ချမ်းသာဆိုသလို ထွေးမောင်ကလည်း ငနပ်။ မူးတာမူးနေတာ အမူးပါး။ ထရံပေါက်ကျလာသော အလင်းကွယ်သွားတာကို ဖတ်ခနဲသတိပြုမိသည်နှင့် ပုဆိုးကို စလွယ်သိုင်းကာ။
လီးကြီးကို ရမ်းရင်း သေးစက်တွေကို ခါထုတ်၏ ထို့နောက်တွင် အိမ်သာဖက် တစ်လှမ်းရွေ့ကာ လီးကြီးကိုကိုင်ကာ နှင်းဝေသေချာမြင်အောင် လဥတွေကိုစုပ်နယ်ပြနေ၏။ နှင်းဝေကတော့ ဖီလ်းလာပြီးရင်းလာပင်။ တဖြည်းဖြည်း ကြည့်နေရင်း အိမ်သာဖက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး လီးကိုထိုင်ထုပြနေသည့်အဆင့်သို့ရောက်သွားပါတော့သည်။ ထွေးမောင်တို့က မူးရင် တော်ရုံမပြီး။ ထန်လည်းအသေထန်သည်။ ခုလိုအခြေနေမှာဆို ဆက်ပြောဖို့တောင်မလို။ နှင်းဝေဖက်ကလည်း လမ်းကြောင်းခင်းပြီးသားဆိုတော့ အ၀င်နပ်ရင်ပြီလေ။ဒီတော့ “ညီမလေးရေ…ပြီးပလား။ အကိုတော့ပြီးပီ။ ထွက်ခဲ့လေ။” ဂွင်းထုပြရင်း ပါးစပ်ကလည်းမေးသည်။ “ခန…ခနလေး အကိုအေးမောင်။ ပီးတော့မယ်” “မြန်မြန်လုပ်လေ..ခြင်ကိုက်တယ်ညီမရဲ့။ဟဲဟဲ” “ဟုတ်ဟုတ်” နှင်းဝေ ဆက်မကြည့်တော့ပဲ ရေအမြန်ဆေးရင်းထွက်ချလာတော့ ခုနကအတိုင်း ပုဆိုးဂွင်းသိုင်း ဂွေးတန်းလန်းနှင့် အေးမောင်။
အို… “ဘာလဲ ညီမ” “ဘာမှမဟုတ်ဘူး အကိုသွားမယ်” မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသော နှင်းဝေ။ ဒါကိုလည်း အေးမောင်က ဒက်သည်။ သက်သက်မူနေတာလေ။ ရိုးတာပေါ့ “သွားညီမ ရှေ့ကသွား။ အကိုအိမ်သာ မီးပိတ်လိုက်မယ်” အမှန်က အိမ်သာမီးပိတ်စရာမလို။ သက်သက်ကြီး မလန့်လန့်အောင်လုပ်တာလေ။ ဒီ့အပြင် အိမ်သာထဲက ရေ လက်တစ်ခုပ်ခပ်ပြီး လီးပေါ်လောင်းချခဲ့သေးသည်။ အိမ်သာမီးမရှိတော့ ပြန်လမ်းက မှောင်မဲနေသည် အဝေးကြီးမလျောက်ရဲ။ အနောက်က ထွေးမောင်၏ တဖတ်ဖတ် ဂွင်းထုသံကိုလည်းကြားနေရသည်။ ၂ယောက်သားစကားမပြောဖြစ်ပေမယ့် နားလည်နေကြပီ။ လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့.. “နှင်းဝေ” “ရှင်…” ညီမလို့မခေါ်တော့ ဒါကိုရှင်ခနဲ ထူးပြီး တုံ့ခနဲရပ်မိသည်။ “နှင်းဝေကို အကို့ညီက မလိုးဘူးဆို” “ရှင်……” နားထဲ ဒိုင်းခနဲဝင်လာသော စကားကြောင့် ရှိန်းခနဲဖြစ်သွားသည် အကို့ညီက အဖြစ်မရှိတော့ အကိုလည်း အားနာမိတယ် နှင်းဝေရယ်။
ဒီမှာ… ပြောပြောဆိုဆို လက်ကိုဆွဲကာ လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ “အို…” “အကို့လီးက နှင်းဝေ အတွက်ပါပဲကွယ်။ တခြားဘာမှမတွေးနဲ့သိလား” လက်ကိုအုပ်ကိုင်ရင်း ဂွင်းထုသလိုရှေ့နောက်တွန်းပေးနေသည်။ “ဘယ်လိုလဲ နှင်းဝေ” ဘာသံမှမကြားရ။ “လာ လာ လိုက်ခဲ့” ဟုဆိုရာနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင်ပါသွားတော့သည်။ နှင်းဝေရောက်သွားတာက ဘူးပင် ခြံအောက်။ အိမ်က မီးရောင်ဖျော့ဖျော့တော့ ကျနေသည်။အိမ်သာလို အိမ်နဲ့သိပ်မဝေး။ ဘာစကားမှမပြောတော့ပဲ နှင်းဝေကို တွန်းလှဲကာ ထမီကိုလှန်တင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်တွင် လှေကြီးထိုးရိုးရိုးအတိုင်း တက်ခွကာစောင့်ပါတော့သည်။ နူးတာနှပ်တာလည်းမလုပ်။ဒီတိုင်းကြီး ဖိထည့်သဖြင့် နာကျင်မှုက စူးခနဲ။ ပိုဆိုးတာက အပျိုစစ်စစ်ဆိုတော့ ဒစ်မြုပ်ရုံပဲဝင်သည်။ ထပ်ထည့်မရ။ အပျိုမြှေးခံနေသည်လေ။ အားနဲ့ထပ်ဖိချတော့ ဗျလစ်ခနဲအမြှေးပေါက်သွားကား သွေးစတွေထွက်ကုန်သည်။
ဒါကို မသိသော ထွေးမောင်က အားပါးတရစောင့်လိုးသဖြင့် အားး အားးးးး အားး အု အု အု ဖြင့် အော်လိုက် ပြန်ထိန်းလိုက်နှင့် ခံနေရပါတော့သည်။ ဖင်မှာလည်းသဲတွေပေလို့။ ပထမ ပက်လက်လှန်ကာခံနေရင်း။ တဖြည်းဖြည်း တချက်ပီးတချက်ကြာလာတော့ လည်ပင်းကို ဖက်ကာ ဖင်ကိုကော့ပေးလာမိသည်။ သူမကိုယ်သူမလည်း မယုံနိုင်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့စေ့ဆော်ချက်တွေပင်။ သွေးစတွေနှင့် အဖုတ်အရည်ကြည်တို့ ရောကာ ချစ်ကြည်နူး အသံလေးတွေ ဗြစ် ဗြစ်ဗြွှတ်ဗြွတ်ဖြင့် ထွက်လာပါလေသည်။ ရှက်လည်းရှက်၊နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်းမလို့ ကြာကြာမထိန်းနိုင်။ အားနဲ့ဖက်ကာ ပီးသွားပါတော့သည်။ နှင်းဝေပြီးသွားတာသိတော့ ထွေးမောင်လည်း ထိန်းထားတာလွှတ်ချလိုက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အရည်များလျံကျလာပါတော့၏။အိုးကမပူ စလောင်းကပူဆိုသလို ဘသားချောရှက်တာက နှင်းဝေထက်တောင်ပိုဆိုးနေသေးတယ် မျက်နှာချင်းတောင်မဆိုင်ရဲ။
စကားပြောဖို့နေနေသာ ညက မူးမူးနဲ့လွန်ထားတာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျက်သီးပါထတယ်လေ။ ထွေးမောင်ရှက်နေတာမြင်တော့ နှင်းဝေကလည်း ရယ်ချင်တာပေါ့။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ တခွိခွိနဲ့။ ထွေးမောင်နဲ့နှင်းဝေ ကိစ္စကို ရိပ်မိနေတာက ယောက္ခမကြီး ဒေါ်ဘုမ။ သူကလည်း လက်ပူးလက်ကြပ်မမိတော့ ပြောမရ။ စိတ်ထဲတော့ ဒီချွေးမကို မကြည်တော့ဘူး။ နှင်းဝေ ဘာလုပ်လုပ် သူ့သားတွေကို မြူဆွယ်တယ်ထင်နေတော့တာ။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။ နှင်းဝေက အပျိုကြီးဆိုဒ်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဖင်ကြီးတွေက အကိတ်၊ ရင်သားတွေကလည်း ဆိုဒ်ပြည့်လေ။ တံမြက်စည်းပဲလှဲလှဲ အ၀တ်ပဲလျော်လျော် သူ့ဖင်တွေက တင်းရင်း လှုပ်အယ် ထွက်နေတာ။ မကြည့်ချင်မှ အဆုံး ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် သူ့ဖင်တွေက စိန်ခေါ်နေသလိုကြီး။ ဒီ့အပြင်ကိုမှ အောက်သူဆိုတော့ အသားကဖြူတယ်လေ ရေချိုးနေတဲ့အချိန်များဆို ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးအတိုင်းပဲ။
တစ်မနက်လုံး အလုပ်တွေရှုပ်လို့ ညနေဖက် အမောပြေ ခနကျောချရုံရှိသေး။ အေးမောင်က ထန်းရည်ဆိုင်ရောက်နေပြီ။ မနေ့ညက မဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲ ဒီညဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ပေါ့။ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ တစ်မြူပြီးတစ်မြူတင်နေလေရဲ့။ ကာလသားအပေါင်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အေးမောင်ကို နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်နဲ့။ အထူးအဆန်း ခပ်တည်တည်ဖြစ်နေတာက ထွေးမောင်။ သူ့ကိစ္စနဲ့သူဆိုတော့ မနေ့ကလို ၀င်မနောက်သည့်အပြင်ကို သောက်လဲမသောက်ရဲ… ဖြည်းဖြည်းချင်းသောက်နေရသည်။ နည်းနည်းသောက်လိုက် အမြည်းများများစားလိုက်နဲ့ပေါ့။ အေးမောင်က ထန်းရည်လေးထွေလာတော့ ပါးစပ်က အကုန်ထွက်လာသည်။ သူ့မိန်းမ ဘယ်လောက် တောင့်တဲ့အကြောင်း၊ သူဘယ်လောက်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ စသဖြင့် မိန်းမဘွဲ့တသီကြီးကြူးပါလေကော။ မနေ့ကလည်း တမြူနဲ့တင် မိန်းမဘွဲ့ကြူးတာ အခုကတော့ နှစ်မြူကုန်မှ ကြူးတာဆိုတော့ ခံနိုင်ရည်တက်လာပုံ။
အေးမောင်၏ ငယ်သူငယ်ချင်း အောင်ဘုက အနားနားကပ်ကာတိုးတိုးပြောသည်။ ထွေးမောင်စိတ်ဝင်စားသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမိတယ်လေ။ အပြန်ကျတော့ မနေ့ကလောက်မိုးမချုပ်။ ဒါပေမယ့်အေးမောင်က အောင်ဘုအိမ်ခန၀င်မယ်ဆိုိလို့ အိမ်ကိုစောပြန်ခဲ့သည်။ ခြံရှေ့ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့စောင့်နေသော နှင်းဝေကိုမြင်တော့ ထွေးမောင် “အ”သွား၏။ ရွှေစင်ရုပ်ထုလေးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ်။ စိတ်ထဲမှတ်ချက်ချရင်း မနေ့ကကိစ္စပေါ်လာသဖြင့် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျော်ဝင်လာခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် . . .. “ကိုကြီးထွေးမောင် ၊ အေးမောင်ကော ပါမလာဘူးလား။” ဟူသော နှင်းဝေအမေးကြောင့် တုံ့ခနဲရပ်ကာ “အင်း…ခနနေပြန်လာမယ် သူငယ်ချင်းအိမ်ဝင်မလို့တဲ့” ခပ်ပြတ်ပြတ်ဖြေပြီး အိမ်ထဲဝင်ခဲ့သည်။
စိတ်ထဲမှာ နွားသိုးက ကြိုးပြတ်ချင်နေပြီလေ သိပ်မကြာ ကိုယ်တော်ချောက သိုင်းကွက်နင်းပြီးဆင်းလာသည်။ ရေချိုးစေချင်သော်လည်း လူမှန်းသူမှန်းမသိမူးနေသည့် လင်တော်မောင်ကို တွဲကာ အခန်းထဲပို့ရတာပေါ့။ အံမယ်လူသာမူးနေတာ ပုဆိုးက တထောင်ထောင်နဲ့။ လင်တောင်မောင်က ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ခြင်ထောင်လေးချပေး။ မီးလေးပိတ်ပြီး ၀င်လှဲကာမှ ဖြုန်းနဲ ဖက်ခံလိုက်ရ၏။ ဘာမပြောညာမပြော အဖက်ခံရလို့ ရင်ဖိုသွားတုန်းရှိသေး။ ထမီကိုဆွဲချွတ်ကာ လက်ခလယ်အတင်းထိုးထည့်သည်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လန့်နေသဖြင့် အဖုတ်က လက်ခလယ်ပင်ကြပ်နေသည်။ မနေ့က ခံထားရတဲ့အရှိန်ကြောင့်လည်း နာကျင်နေသောအဖုတ်က လိင်စိတ်ချက်ချင်းမပေါ်။ ဒါကိုမသိသော အေးမောင်က အပျိုအစစ်ပဲဟ ဆိုပြီး ပြီးအောင်ပင် မနှူး။ လီးကြီးတည်ကာ ဗြစ်ခနဲ ထိုးထည့်လိုက်ရာ တဆုံးဝင်သွားပြီး နှင်းဝေလေးတစ်ယောက် ကြယ်တွေလတွေမြင်သွားသည်။
၀င်ဝင်ချင်းမနားပေ ချက်ချင်းအဆုံးထိဆွဲထုတ်ပြီး ဗြစ်ခနဲ ထပ်ထည့်သည် ဒီတကြိမ်တော့ မရ.. “အမေ့”ဆိုပြီး အော်မိသည်ပေါ့။ ဒါကိုလည်း မညှာမတာ အေးမောင်က ပါးစပ်အတင်းပိတ်ကာ လက်တစ်ဖက်က လီးကိုကိုင်ပြီး ဇွပ်ခနဲထည့်ကာ ကျွဲလိုးနွားလိုး လိုးပါလေသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက် ဘာခံစားချက်မှမရ။ နာကျင်မှုသက်သက်ဖြင့် ရုန်းကန်အော်ဟစ်နေမိသည်။ အကင်းမပါးသော အေးမောင်က အပျိုမလေး ကြေကွဲနေသည်ကို ဂုဏ်ယူအားမိတော့ လီးက တင်းသထက်တင်းလာသည်။ လဥတွဲတွဲကြီးက ဖင်ကို တဖတ်ဖတ်ရိုက်နေသည့်အပြင် အဖုတ်က အရေကြည်မထွက်တော့ ဗြိခနဲ ဗြိခနဲ အသံက အတိုင်းသား။ အသားစတို့ပွန်းပွဲ့ကာ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ထွက်နေတော့ နှင်းအိ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျမိသည်။ ကိုယ့်ယောက်ျားပဲလေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ မျက်စိဆုံမှိတ်ပြီးစိတ်လျော့ချလိုက်ကာ။ ကဲလုပ်ချင်ရာလုပ်စမ်းဆိုပြီး အံကြိတ်ခံရတာပေါ့။အေးမောင်တို့ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပုံက ဒါသူ့ကိုခိုက်သွားသည်ထင်ပြီး။
ပေါင် နှစ်ချာင်းကိုထမ်းကာ အပေါ်က ဖိဖိဆောင့်ပါလေရော နာသထက်နာ အောင့်သထက်အောင့်.. နှင်းဝေ ခမျာ..လောကငရဲ အရှင်လတ်လတ်ကျနေပါတော့သည်။ အချက် နှစ်ဆယ်လောက်စောင့်တော့ နှင်းဝေ ဖီလ်းလာနေပြီ။ ထိုတော့မှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြပ်သိပ်နေတဲ့ အဖုတ်ဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ အေးမောင်လည်းအရည်တေ အထဲမှတင်ထွက်သွားသည်။ ပြီးပြီးချင်း ကျောပစ်လှဲကာ တခေါခေါအိပ်ပျော်သွားပါလေရော။ နှင်းဝေမှာတော့ ဒေါသ၊ အလိုမကျဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်းတို့က တလှိုက်လှိုက်တက်လာပြီး မျက်ရည်တသွင်သွင်စီးနေပြီပေါ့။ ခမျာမှာ လင်မယားချင်း ပထမဆုံးဆက်ဆံတာမှာ မုဒိမ်းအကျင့်ခံလိုက်ရတာလေ။ မောပန်းနွမ်းလျမှုနဲ့ နာကျင်ခြင်းတို့ကြောင့် ခနလောက်အကြာ မှေးခနဲဖြစ်သွားသည်။ ကြာကြာအိပ်ခွင့်မရ ထဘီ ပြန်မ၀တ်ရသေးသောကြောင့် အရှင်းသားဖြစ်နေသည့် ခါးအောက်ပိုင်းမှ ယခင်ကလိုနာကျင်မှုမျိုးထပ်ခံစားရပြန်သည်။
ဒီတစ်ခါတော့မရုန်းနိုင်တော့ ငိုလည်းမငိုနိုင် အော်လည်း မအော်နိုင်။ အေးမောင်မှာ ဘီလူးစီးသလို အသဲအမဲ စောင့်စောင့်လိုးနေပုံမှာ ကုတင်ပင် တကျိကျိမြည်အောင် တုန်သည်လေ။ တချီပြီးထားသဖြင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်သာသာ တရစပ် ဆောင့်လိုက်နားလိုက်ဖြင့် အကြမ်းပတမ်း ဆော်တာပေါ့။ အောက်က နှင်းဝေမှာ ဖီလ်းမလာသည့်အပြင် နာကျင်မှုတွေသာ တစ်ထပ်ပီးတစ်ထပ်….. မုန်းတီးမှုတွေက တစ်ရစ်ပီး တစ်ရစ်…. ပြီးသွားတော့လည်း ခုနကအတိုင်း ဟောဟဲ….. ဟောဟဲဖြင့် ပက်လက်လှန်ကာ ပြန်အိပ်သွားပြန်သည်။ အာရုဏ်တက်တော့လည်း နောက်တစ်ချီ ဒီတစ်ခါတော့ မနက် ငါးနာရီခွဲတဲ့အထိ မပြီးနိုင်… မောလွန်းလို့သာ နားလိုက်ရသည် အေးမောင် ဆက်မဖိုက်နိုင်တော့….. အောင်ဘုဆီက ဆေးက ခုထိအစွမ်းပြတောင်နေတုန်း ….ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ ဖလက်ပြသွားလေတော့သည်…ပြီးပါပြီ။